Su’aalaha Qeyre Lagu weysiindoono shirka washiton wax ka ogow . – XAMAR POST
Su’aalaha Qeyre Lagu weysiindoono shirka washiton wax ka ogow .
By Zakariye iiman On Apr 9, 2019
Shalay gelinkii dambe ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo waxaa lagu soo dhaweeyey Magalada Washington ee dalka Mareykanka, halkaas oo la filayo in Maanta ay uga bilaawdaan kulamo gooni gooni ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u jeedka uu u tegay Magalada Washington waxa ay ka tahay ka qeyb galka shir ay soo qaban qaabiyeen Madaxda Bankiga Adduunka, IMF, isla markaana ay ka qeyb galayaan Madax farabadan.
Waxa Maanta Ra’iisul Wasaaraha halkaasi uga bilaabanayo kulamo uu la qaadan doono Madaxda Bankiga Adduunka, IMF, isaga oo sidoo kale la kulmi doona Senator ka tirsan Congress-ka Mareykanka iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in kulamada lagu weeydiin doono su’aalo ku qotoma waxqabadka Xukuumadiisa iyo caqabadaha lasoo gudboonaaday sida ay isaga maareysay iyo dhibaatooyinka xilligaan heysta.
Cadeyn: Gudoomiye Yariisow shalay iyo maanta maxaa iska badalay ?
Gudoomiye Yariisow iyo Xaaji muuse suude maxaa horey uga dhaxeyay?